समाचार - केहि लन घास काट्ने ब्लेड प्रयोग गर्दछ तपाईंलाई थाँहा छैन
हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै आकारहरू छन् लन घास काट्ने ब्लेडहरू, त्यसैले यो हामीलाई छनौट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। लन मोवर ब्लेडहरू कसरी छनौट गर्ने? मावरको ब्लेड कसरी समायोजित गर्ने? र कसरी लन मोवर ब्लेडहरू प्रयोग र मर्मत गर्ने? निम्न सम्पादकले तपाईंलाई परिचय दिनेछ।
लन घास काट्ने उपकरणको ब्लेड कसरी समायोजित गर्ने?
जब समायोजन लन घास काट्ने ब्लेड स्क्रू, यो पेंच कडा गर्न आवश्यक छ, यसलाई १ / -3--3 / turns पालो घुमाउनुहोस्, नटमा पेच गर्नुहोस्, धुलोलाई हेरफेर गर्नुहोस्, यदि धोबीर लचिलो रूपमा सार्न सक्छ भने, नट कस्नुहोस् र प्याड फेरि जाँच गर्नुहोस् कि ब्लेड सर्न सक्छ या सक्दैन। यदि स्क्रू धेरै कडा छ भने, ब्लेड सर्ने छैन। सबै स्थापना भएपछि, परीक्षण ड्राइभ, ब्लेड एक मिनेट को लागी चलाउँदछ, आफ्नो हातले पेंच छुनुहोस्, यो तातो वा धेरै तातो छ, ब्रश कटर ब्लेडले संकेत गर्दछ कि स्क्रू धेरै कडा छ, कृपया फेरि समायोजित गर्नुहोस्।
लन मोवर ब्लेडहरूको मर्मतमा राम्रो काम गर्नुहोस्
परम्परागत बगैचा जुलाउने मेसिनरी अब अवस्थित बगैंचा रोपण फार्म, र नयाँ ब्रश कटर अनुकूल गर्न सक्दैन ब्लेड ब्रश कटर हालको बगैचाको निराको अपरेशन आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छ। वीडिंग अपरेशन्सका लागि ब्रश कटरको प्रयोगले कार्य दक्षतामा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ। माटोको क्षति रोक्न, वातावरण सुन्दर बनाउन, पानी रोक्न र आर्द्रता रिपोर्ट गर्न, र माटोको जैविक पदार्थ बढाउन ब्रश कटर ब्लेडहरू जमिनमा राख्न सकिन्छ।
ब्रश कटर ब्लेडहरू सुरक्षित रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने
उत्तर: योग्य पेट्रोल र इञ्जिन तेल प्रयोग गर्नुहोस्, र ब्रश कटर ब्लेडको मिक्सिंग अनुपात निश्चित गर्नुहोस् (२:: १ वा :०: १)।
B. नियमित रूपमा (२ hours घण्टा) जाँच गर्नुहोस् र एयर फिल्टर र स्पार्क प्लग बदल्नुहोस्।
ग। तेलको ट्या oil्कमा काम गरेपछि, तपाईंले १० मिनेट आराम गर्नुपर्नेछ, र प्रत्येक काम पछि मेसिनको छाला ग्यास्केट सफा गर्नुहोस् तातो खपतलाई सुनिश्चित गर्न।
D. भण्डारण गर्दा तपाईले शरीर सफा गर्नुपर्नेछ, मिश्रित ईन्धनको चलन छोड्नुहोस्, ब्रश कटर ब्लेडले वाष्पमा ईन्धन जलाउँछ, स्पार्क प्लग हटाउँनुहोस्, सिलिन्डरमा १-२ मिलीलिटर तेल थप्नुहोस्, स्टार्टर २- pull तान्नुहोस्। समय, स्पार्क प्लग स्थापना गर्नुहोस्।
ब्रश कटर ब्लेडको नायलन लकको लम्बाई (= १cm सेमी) नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। ब्रश कटर ब्लेडको ब्लेड प्रयोग गर्दा, ब्लेडको सन्तुलन सुनिश्चित गरिनु पर्छ, र कम्पनको साथ ब्लेड प्रयोग गर्नु हुँदैन।
(१) डोरी - कोमल घाँसको लागि जुन काट्न सजिलो छ।
(२) स्क्वायर ब्लेड - मुख्य रूपमा कडा र भित्री जटिलताहरूका लागि नर्कहरू जस्तो।
()) Rhombus ब्लेडहरू - vines, साना झाडी, र कडाको लागि।
लन घास काट्ने डोरीको स्थापना
घाँस काट्ने टाउको को टुक्रा टुक्रा गर्नुहोस्, त्यसपछि घुम्ने कोरलाई भित्र बाहिर निकाल्नुहोस् र दाउरा रोप्नुहोस्। घाँस काट्ने डोरीको लम्बाई धेरै लामो हुनुहुँदैन, १०-१-15 सेमी उचित छ, यो हिट गर्न सजिलो छैन, नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन, र तोड्न सजिलो छैन। स्थापना गर्दा शाफ्ट वा घाँस काट्ने टाउकोमा एउटा गाँठ बाँध्नुहोस् र रस्सीलाई विपरीत दिशाबाट बाहिर तान्नुहोस्, अन्यथा डोरी ढल्ने प्रक्रियामा पनी बाहिर आउनेछ; दुबै छेउमा घाँस काट्ने डोरीको लम्बाई समान हुनुपर्दछ, अन्यथा असंतुलनको कारण घाँस काट्ने अवसर छोटिनेछ। लन घाँस काट्ने घाँस काट्ने डोरी केवल जवान घाँस काट्नका लागि उपयुक्त छ, धेरै बाक्लो, पुरानो घाँस जसलाई लिग्निफाइ गरिएको छ, ब्लेडले काटिनु पर्छ। तल बतास कसरी हावा गर्ने भन्ने छघाँस काटन घाँस काट्ने डोरी।
(१) घाँस काट्ने टाउको हटाउनुहोस्, त्यहाँ भित्तामा रोप्नको लागि ठाउँ छ।
(२) घाँस काट्ने डोरीलाई आधा भागमा तह लगाउनुहोस्, घाँस काट्ने ठाउँमा रस्दा घाँस भएको ठाउँमा जाम गर्नुहोस् र भित्र घुमाउनुहोस्।
()) जब उल्टो काम सकिसके पछि दुबै छेउमा खम्बाबाट रोप्ने डोरीलाई दिनुहोस्।
को छनोट लन घास काट्ने ब्लेडधेरै महत्त्वपूर्ण छ। बिभिन्न अवसरहरू र सम्बन्धित लन मोवर ब्लेड चयनको लागि, तपाईंले सहि लॉन मोवर ब्लेड छनोट गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, म सबैलाई सम्झाउँछु कि तपाईंले आकार निर्माताहरूका ब्लेडहरू छान्नुपर्दछ। हांग्जो Zhengchida प्रेसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड अग्रणी छबगैचा मशिनरी ब्लेड को निर्माता चीन मा खरीद गर्नका लागि स्वागत छ।